On 6/11/2018 (IST)
Jawaabaha oo buuxa waxaad ka aqrin doontaan shabakada solaportal.com oo aad uga barateen xaqiiqda baarista.
Markii ugu horeysay ee aan is aragno waxay ahayd bishii November 2015 aniga iyo asxaab kale oo ku sii socona magaalada Rotterdam oo ay ka jireen cayaaraha kubadda cagta, runtii si wanaagsan ayuu gurigiisa noogu soo dhoweeyay, qaas ahaan xaaskiisa oo ahayd qof runtii aad gurigeeda inoogu soortay sidii lagu yaqaanay gabdhaha Somaliyeed ee loo martiyo.
Hadii aan iraahdo waxaan qoraal ka sameynayaa taariikhda DAHIR CALLASOW iyo shaqsiyadiisa waxaa filayaa in aan u baahanahay 100 qoraal oo noocan ah, laakiin muhiimada qalinkan waa "DAHIR CALLASOW MAXAA KA XANAAJIYAY"?
Arimaha af-lagaadada WAALIDKEYGA,WALAALAHEYGA,XAASKEYGA IYO CARUURTEYDA wuxuu bilaabay wixii ka dambeeyay OKTOOBAR 2017 oo ahayd waqtigii aan ka qaaday wareysigii LIVE ka ahaa ee dhaawaca weyn u geeystay, taasoo si lama filaan ah aan u weeydiiyay su'aalo aan hore loo warsan oo uu ka xanaaqay.
Intaa ka dib DAHIR CALLASOW wuxuu waday dagaal qabow, caay iyo isagoo aad uga xumaa taageerida Dowlada Somaliya , safaradii aan ku tagay Muqdisho kulamadii aan la qaatay madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale ee qaranka, anigu ma ihi dadka diirka dhugul ee SOCIAL MEDIA lagu biiqsado, sidaa awgeed dheg jalaq uma siin.
Arimo kale oo dhanka YOUTUBE COPYRIGHT aan ka xiray oo markii dambena uu raali gelin ka bixiyay oo aan ka qaaday way jirtaa, laakiin waxay ahayd arimo iska basiid ah oo laysku dayey TIJAABO BIIQSI, laakiin way shaqeyn weyday.
BISHA RAMADAANKA 2018 IYO BIIQSIGA FASHILMAY!
Aniga Facebook saaxiib kuma nihin, sidaa awgeed waxaan maqlaa iyadoo la leeyahay DAHIR CALLASOW baa ku soo caayey saaka, duhurkii, afurkii iyo taraawiixdii, hadii qof kale ahaan lahaa qiimaan siin lahaa, laakiin CALLASOW oo isoo caayey anigu ma biilkii reerkuu iga goyn karaa?
Dad badan ayaa marka uu soo caayo u jawaaba, taasi waa inta keliya uu doonayo, waxaan ku ogaaday mar ay fooda is dareen isaga iyo Gudoomiyaha ELECTRONIC ISBAARO North America oo la yiraahdo ABDIHAKIM OSMAN NUR , isagoo ka dib uruuriyay lacag 10,000 USD ah oo qaraabo lagu baadi goobayey.
Hadii aan ku soo laabto arimaha dhacay RAMADAANKA 2018 ee Dahir Callasow hurda la'aanta ku riday waa arin markii hore runtii aan ka warqabin, laakiin aan gadaal ka ogaaday!
Shabakada solaportal.com/Facebook waxay 7 Feberaayo 2018 soo bandhigtay baaritaan dheer oo ay ku sameysay FACEBOOK been abuur ah oo laga sameystay XILDHIBAAN MUSTAFE DHUXULOOW oo dad iyo qabaa'ilo aad u farabadan lagu xumeeyay, baaritaankaa oo100% xaqiijiyay in Mr CALLASOW uu ka dambeeyay.
Solaportal waxa u fududeeyay in ay soo ogaato FACEBOOGA been abuurka ah ee laga sameystay Mustafa Dhuxulow shabakada barbaariye.com, waagacusub.com and barbaariye.com waxay isla isticmaalaan 1 SERVER.
Wixii macluumaad ah ee ONLINE la soo geliyo way adagtahay sida loo qariyo, saa awgeed shabakadaha iyo Facebuugyada DAHIR CALLASOW mas'uulka yahay hoos ka aqriya.
Waxaa ka sii daran markii aan soo bandhigay shabakadahiisa iyo macluumaadkooda, isla markiiba wuxuu ka codsaday shirkada HOSTINKA in PRIVATE looga dhigo si macluumaadka iyo cinwaankiisa BREDA aan looga arkin ONLINE.
Isla markii aan soo bandhignay milkiilaha BARBAARIYE.COM in uu yahay DAHIR CALLASOW wuxuu bedelay PICTURE PROFILE iyo LINKIGII shabakada oo uu ka dhigay DAYNIILE.COM oo aan ognahay shaqsiga iska leh.
DAHIR CALLASOW si uu baad uga qaado siyaasiyiinta,ganacsata iyo qof walba oo uu is leeyahay waad biiqsan kartaa wuxuu sameystay SHABAKADO, FACEBOOK yo, EMAILO, YOUTUBE yo, iyo TWITTERO aad u farabadan oo inta badan uu isku dayo in uu qariyo, laakiin way adagtahay wixii ONLINE la soo geliyo in la qarin karo.
Shabakada SolaPortal waxay idin soo bandhigeysaa dhamaan macluumaadka DAHIR CALLASOW uu ku leeyahay ONLINE ee sida ISBAARADA ugu shaqeysto, qaarkood waa laga xiray, laakiin inta badan si caadi ah ayay u shaqeeyaan.
SHIRKII BRUSSELS KA DIB
Waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee Somalida ku arkeen baraha bulshada waxaa ugu badnaa intii uu socday shirkii ka dhacay wadanka BELGIUM bartamihii bisha Luulyo 2018, in DAHIR CALLASOW uu maalin walba isku soo sawirayay siyaasiyiintii Somaliyeed ee har iyo habeen uu ku cayn jiray ONLINE, ka dibna waxaa dhacday arin kale oo DAHIR CALLASOW uu sameeyay oo ah in gebi ahaan uu joojiyay caaydii lagu yaqaanay tan iyo intii uu qurbaha soo galay, taasoo dadka inta badan u arkeen in loo balan qaaday lacago isla markaana balan loo qabtay.
Gudoomiyaha ELECTRONIC ISBAARO wuxuu ilooway in INTERNETKA uu yahay meel aan laysku BIIQSAN karin isla markaana lagu gaban karin,waxaa hubaal ah in waqtigaagii BIIQSIGA uu dhamaaday.
Baaritaankaa markii aan sameeyay dhowr jeer ayuu isku dayey isla markaa soo codsaday in barta solaportal ee Facebook laga saaro, laakiin sidaad ka warqabtaan weligay wax aan Facebook soo geliyay kama saarin ilamaa ay qalad yihiin oo la xaqiijiyo.
Isla xiligaa Feberaayo 2018 aan baaritaankaa hawada soo geliyay, waxaa helay qoraalada baaritaanka QAREENKA ama LAWYERKA Eng YARIISOOW oo dacwad dheer ay dhex taalay CALLASOW, ugu horeyn arintaa ayaa DAHIR CALLASOW si xun uga xanaajisay, isagoo mooday in aan shaqo ku leeyahay dacwada isaga iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Waraaqdii QAREENKIISA Bird & Bird u soo dirtay ee arimaha Eng Yariisoow markii uu arkay wuu QARXAY!.
Ka dib wuxuu ii soo diray fariin aan aad ula yaabay oo uu leeyahay TAAKADA ayaa kaa qaadayaa,CAAYDA ayaan kaa joojinayaa, MOORYAANTA MAGAFENA waa kaa qaleynayaan hadii aad soo saxiixdid waraaqda hoose!, OH WELL jawaabta fariinta aan u diray waxay ahayd ABDINASIR ISMAIL qofkii BIIQSAN lahaa weli ma dhalan, ee CAAY iska daayee CIRKA soo dumi.
Waxaa ka sii darnaa QAREENKIISA ama LAWYERKIISA oo la yiraahdo PETER Schouten ayaa EMAIL ii soo diray isagoo leh, fadlan soo saxiix qoraalka Facebuugaada Solaportal aad soo gelisay ee sida qaladka ah u dhacay! jawaabta aan siiyay waxay ku koobnayd laba xaraf Ingriis ah F Y.
Arimuhu sidaa bay u dhaceen, ka dib wuxuu isku dayey BIIQSIGII dadka uu ku sameyn jiray oo ahaa in isaga iyo kuwa MAGAFE ka soo fakaday ee tahriibka Yurub ku yimid in ay CAAY iyo AF LAGAADO qoyskayga ku sameeyaan, laakiin waxay ilooween qofka ay is yiraahdeen BIIQSADA.
ABDINASIR ISMAIL "SOLA" siduu hore u sheegay weli ma dhalan kii BIIQSAN lahaa, runtii aniga ma daawan VIDEO isaga iyo MOORYAANTA kale ay duubaan, laakiin waxaa la ii soo diray dhowr boqol oo COMMENTS dadka ay ka bixiyeen, taasoo jawaab fiican u ahayd.
Dad badan oo asxaab nahay baa igu yiri ABDINASIR maad u jawaabtid!
NEVER, waa inta uu rabo, qaabka loo bahdilo waa iyadoo marnaba loo jawaabin.
Jawaabtiisa muhiimka ah waa dhanka sharciga, DAHIR CALLASOW hadii uu ku soo caayo weligaa ha u jawaabin, SAWIR SHAASHAD ama SCREEN SHOT ayaa laga qaataa lama caayo, ka dib QAREEN wadanka HOLLAND ayaa la qabsadaa, dad badan oo arimahaa sameeyay ayaa ila soo xiriiray, iyadoo maxkamado kala duwan ay kaga furan yihiin, YURUB, NORTH AMERICA iyo SOMALIYA.
DAHIR CALLASOW in si sharci ah looga badiyo aad buu u necebyahay,2015 markii DAHABSHIIL ay ka guuleystay oo la yiri ka saar dhamaan qoraalada been bauurka ah ee shabakadihiisa uu soo geliyay, wuxuu suuqa soo geliyay in uu ka badiyay DAHABSHIIL oo lacag magdhow ah maxkamadu ay siisay.
Waa maxay farqiga u dhexeeya aniga iyo DAAHIR CALLASOW? waxaan shaqsiyan xaqiijin karaa in aan ahayn wax isku dhow, anigu ma dhibsaday caayda waalidkeyga iyo qoyskayga ee CALLASOW iyo MOORYAANTA kale? MAYA!.
Hadii aan dhibsan lahaa JAWAAB xanuun badan oo VIDEO la socdo ayaan hawada soo gelin lahaa oo gacanteyda ku jira,
laakiin I AM BETTER THAN THAT!
Laakiin COMMENTSKA faraha badan ee la ii soo diro waan ku raaxeystaa hadii aan daacad u hadlo!
Ugu dambeyn waxaan qoraalkayga ku soo af jarayaa sawiradii iyo qoraaladii ugu qosolka badnaa ee XANAAQA DAAHIR CALLASOW iyo markii uu isku dayey in ABDINASIR SOLA SAWIRO iyo VIDEO uu ku waabsado!.
Wuxuu rabay in dadka uu ka iibiyo BEEN ABUUR ah ABDINASIR baa QAMRA caba, ugu horeyn ISIR uma lihin, laakiin way hoos baxday, hadii uu eegi lahaa sawirada OKTOOBAR 2011 ee xaflada cayaaraha LEICESTER waxaan filayaa in aanu is ceebayn lahayn, LINKIGAN RIIXA reer FACEBOOK ishaa macalin ahee.
Tan ka sii daran waxay ahayd sawirka hoose oo la yiri SOLA xaaskiisa sawirkeeda ayaa la helay aan caayno, ugu horeyn CAAY aniga la iguma biiqsado, tan xigta FACEBOOGEYGA waa furan yahay ee RESEARCH samee si aad u heshid sawiro farabadan.
Gabadha ila sawiran waxaan u shaqeeyay 9 sano, PHD holder oo kabaheeda MOORYAANTA aan boolishi karin!
Noocan oo ISBAARO inta lagu qabtay XABSI waqti dheer ku jiray laga soo daayey oo 2015 kii MAGAFE iyo TAHRIIB ka soo badbaaday ayaa raba in ONLINE kugu biiqsado, ADUUNYOOY XAALKAA BA'A.
Qoraalka dusha xili uu ku jiray shabakada dhowr maalmood ayaa waxaa ila soo xiriiray shaqsi SOMALI ah oo la jooga AJANABI SOUTH AFRICAN ah, waxay ii sheegeen in shaqsiga la yiraahdo Mr ALLASOW ay sheeko dhex martay, runtii ma fahmin waxa ay ka hadlayeen, laakiin waxay ii soo direen EMAIL uu ku jiro koobi BUUG PDF ah, kaasoo la yiraahdo: Debbie Calitz - 20 Months in Hostage Hell, waa buug ay qortay gabar SOUTH AFRIKAN ah oo burcad badeed ay ku qafaasheen Somaliya, markii la soo madax furtay ayay buugan xiisaha leh ka diyaarisay waxyaabihii la soo gudboonaaday waqtigaa.